Kulan lagu taageerayo socdaalka horumarinta cagaaran oo ka dhacay Birmingham. - Cakaara News
Kulan lagu taageerayo socdaalka horumarinta cagaaran oo ka dhacay Birmingham.
Birmingham (CN) 03/11/2015 kulankaasi oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qeybgalay Gudiyada jahliyadda DDSI Ee Magaalada Birmingham Ee UK, waxaana lagu taageerayay kulankaasi Waftigii balaadhan ee uu Hogaaminayay Madaxweynaha DDSI ay Ku Wehlinayeen Masuuliyiin Ka Tirsan Xukuumada DDSI ee oo loogu Magac Daray Socdaalkii Horumarinta Cagaaran .
kulankan oo ahaa mid si meeqaam sare ah loo soo diyaariyay ayaa waxaa ka hadlay gudiyada jahliyada, haweenka jahliyada, odayaasha iyo waxgarad kale kuwaasi oo cabbiray dareenkooda ku aaddan sida ay u arkaan Socdaalkan laagu Magac Daray Socdaalka Horumarinta Cagaaran ee uu Madaxweynaha DDSi Mudane Cabdi Maxamuud Cumar Wafdiga uu hogaaminayaa ay ku marayaan qaarka mid ah gobolada deegaanka ee loogu kuurgalayo heerka ay taagan yihiin hirgalinta mashaariicaha horumarineed ee bulshada lagaga saarayo saboolnimada laguna gaadhayo wadamada uu dhaqaalahoodu meel dhexaadka yahay.
kulankaa ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii ugu horayntii ka hadlay Shekh Dayib oo ka Mid Ah Culimada Ugu Weyn Dalka UK oo ku hadlayay magaca Odayaasha Dhaqanka DDSi Ee Magaalada Birmingham isaga oo u mahad celiyay dadkii soo agaasimay munaasabaddaan iyo waliba jahliyada sida diiran uga soo qaybgashay munaasabadda isaga oo sheekhu sheegay in aad u Soo Dhaweynayo Taageerayaana Socdaalka Horumarinta Cagaaran ee loogu kuurgalayo nolosha bulshada iyo hirgalinta mashaariicaha horumarineed.
Waxaa kale oo isna ka hadlay madashii ay ka socotay munaasabadani Eng C/casiis Xasan Cabaade oo sharax dheer ka bixiyay ujeedada iyo ahmiyada ay leedahay munaasabadani ee loo qabtay kaasi oo sheegay in ay tahay soo bandhiga dareenka farxadeed iyo taageeraan ay jahliyadu u qabto Socdaalka Horumarinta Cagaaran uu Madaxweynaha Iyo Wafdigiisa Ay ku Marayaan Gobolada.
Gudoomiyaha Ururka Haweenka jahliyada DDSI Ee Magaalada Birmingham Ee Uk , iyo waliba gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka DDSI ee Birmingham marwo Ayaan Xasan oo ahaa dadka sida wayn u soo agaasimay munaasabadan ayaa ku dheeraaday taaagerada balaadhan ee ay jahliyada la garabtaagan yahay socdaalka horumarka cagaaran ee madaxwayna DDSJ iyo waftigu ku marayaan qaarka mid ah gobolada deegaanka waxayna ka warbixiyeen horumarka balaadhan ee wakhtiga yar ku hirgalay.
Aqoon yahay kii iyo waxgaradkii kale oo munaasabadaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa Maxamed Cali, Shekh Cabdiraxmaan, ugaas Cabdinaasir, Ugaas Xasan , Gudoomiyaha Ururka Haweenka DDSI Ee Magaalada Birmingham Ee Uk , Abdiaskar. Munaasabadan oo ay jahliyadii ka hadashay aad u badnayd oo magacyadooda halkan aan lagu Soo Koobi Karin ayaa Dhamaan Waxay Taageereen Socdaalka Horumarinta Cagaaran ee lagu sii xoojinaya hirgalinta qorshyaasha horumarineed.